Kugadzirwa kwemidziyo yekurapa, zviridzwa zvekuyedza uye zvinodyiwa zvagara zvine zvinodikanwa zvekusabereka uye kutapurirana chaiko.Lead Fluid peristaltic pombi dzinoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yezvokurapa, kunyanya nekuda kwe:
> Pombi yemvura yakachena kwazvo, iri nyore kuchenesa uye kuchenesa
>Paipi inogona kushandiswa kamwe chete kana kudzokororwa
› Kutapurirana kwakapfava uye kwakagadzikana, kuyerwa kwakaringana
›Inokwanisa kufambisa zvinhu zvine magineti beads, gels, glycerin uye zvimwe zvitsvina netsvina
›Kuvimbika uye kurongeka kwekuzadza chaiko
›Mudhuri wemukati wepombi wakatsetseka, hauna magumo akafa, hauna mavharuvhu, uye zvakasara zvakaderera.
› Flexible scalability, diki nzvimbo reshiyo uye mutengo wakaderera
›Low shear simba kuchengetedza kutendeseka kwezvinhu
Lead Fluid's medical dialysis pombi inogona kupa yakakwana mhinduro kune zvinotevera zvinodiwa:
> Yakazara otomatiki chemiluminescence / POCT uye imwe IVD zvishandiso zvesampling & kuraswa kwemarara
›Kuongororwa kweprotein, kuongororwa ropa, kuongorora stool, nezvimwe.
>Kuvhiya kubvisa, hemodialysis, nezvimwe.
>Kuchenesa mazino, liposuction, lithotripsy, intestinal perfusion, nezvimwe.
› Kuzadza-chaiyo kuzadza kwe diagnostic reagents, kurongedza zvinwiwa, nezvimwe.
Mamiriro azvino edenda achiri akanyanya, kudzivirira uye kutonga hakugone kuzorora, uye basa rekurwisa "denda" richiri rakaoma kwazvo.Mukudzivirira nekudzora denda, kudiwa kwemamwe makemikari kwakwira uye kuita zvigadzirwa zveshomeka, senge mishonga yekuuraya hutachiona uye mareagents ekuyedza.Kuti ive nechokwadi chekuwanikwa kwemusika, vagadziri vakuru vari kumhanyisana nenguva kuita kugadzirwa.Kushandiswa kwemhando yepamusoro-tekinoroji yemishonga semichina yekuzadza otomatiki uye mitsara yekuzadza mitsara yakadzikisa zvakanyanya kudzvanywa kwekugadzira kwevazhinji vagadziri.Lead Fluid yanga ichiita chinyararire chikamu chake kutsigira basa rekudzivirira nekudzivirira denda.Lead Fluid's peristaltic pombi uye yekuzadza system peristaltic pombi inoita basa rinokosha mairi.Lead Fluid inobatsira kuyedza reagents uye vaccine kuzadza pasi pedenda.
♦ Microliter peristaltic pombi WSP3000
1. Kunyatso kuzadza kwepamusoro, iko kukanganisa kuri pasi pe ± 0.2%.
2. Modular dhizaini, iri nyore kuwedzera, akawanda pombi anogona kukandwa kuti agadzire akawanda-channel yekuzadza system.
3. Yakakwira chaiyo servo mota drive, torque hombe, mahara-kugadzirisa, Rotary pressure chubhu chimiro, kunyatsoshanda.
4. Iyo pombi yepombi yakaderera mukurasikirwa, hupenyu hunoramba huripo hunosvika maawa 1000, maawa gumi nemaviri attenuation rate＜1%.
5. Kusveta kumashure basa, zero kudonha, kuvhara pakarepo.
6. Yakakwirira yakachena pombi, nyore kuparadzanisa, nyore kuchenesa uye sterize, tsigira CIP uye SIP.
7. Iyo pombi haisi nyore kuvharika, uye inokwanisa kurarama nyore nezvinhu zviri nyore kudonha uye zvine imwe viscosity yakadai semagnetic beads, glycerin, nezvimwe.
8. Inogona kushandiswa nemaoko kana kushandiswa neine automatic production line.
♦ Peristaltic Pump Kuzadza System
1. Ipai panguva imwe chete yekushanda kwematanho akawanda, uye wedzera nhamba yematanho kuburikidza nekuisa cascading yeakawanda masisitimu.
2. Yakazvimiririra calibration yemvura inozadza vhoriyamu kune yega yega chiteshi kusangana nemutengi kunyatsozadza zvinodiwa (kukanganisa ≤± 0.5%).
3. Inogona kugamuchira chiratidzo chekutanga chemuchina wekuzadza uye chiratidzo chekumira chekuzadza chekushaikwa kwemabhodhoro kuti uone pamhepo otomatiki kushanda;imwe yekuzadza kushanda inogona kudzorwa nerutsoka switch kuti uone kumira-yega kushanda.
4. Mvura yacho inongosangana nehose uye kwete pombi yepombi, hapana kuvhara kwevhavha, uye kusvibiswa kwemuchinjikwa kunodziviswa.
5. Inokodzera mabrasive liquids, viscous liquids, emulsions kana zvinwiwa zvine furo, zvinwiwa zvine huwandu hwakawanda hwegasi, zvinwiwa zvine zvidimbu zvakamiswa.
Mukuzadza kwema test reagents, kazhinji pane zvinotevera zvinodiwa:
01 Sangana nezvinodiwa zvekuzadza vhoriyamu uye sterility;kukwirira kwekuzadza kwepamusoro uye kushanda kwepamusoro.
02 Iyo yekuzadza sisitimu ine kugadzikana kwakanaka, hapana kudonha kana kurembera chinhu chemvura.
03 Inogona kuzadzwa nezvinwiwa zvinopusha kana zvinosvibisa zvinwiwa zvine zvimedu zvakamiswa.
04 Kana uchizadza mvura ine biological chiitiko, iyo biological chiitiko haigone kuparadzwa.
05 Pombi iri nyore kushandisa uye iri nyore kuchengetedza.
Iyo yekuyerera mwero weiyo pamusoro yakakurudzirwa Lead Fluid peristaltic pombi zvigadzirwa zvakapamhama uye zvinochinjika, zvine yakakwira yekuzadza mvura kunyatsoita uye kugadzikana;ine shear yakaderera, inogona kushandiswa kutakura uye kuzadza biologically inoshanda zvinwiwa pasina inactivation;Iyo mvura mukuzadza inongobatana chete nehose, kubvisa njodzi yekusvibiswa-kusvibiswa;nekusarudza hose isingadziviriri, inogona kushandiswa kuzadza zvinwiwa zvakasiyana-siyana zvinopisa, uye nekusarudza hose inodzivirira kupfeka, inogona kushandiswa kuzadza zvinwiwa zvine zvidimbu zvakasimba;Nezvakasiyana zvimiro zvezvinwiwa, zvakasiyana kuzadza vhoriyamu zvinodiwa uye zvakasiyana zvinoshanda zvinodiwa, imwechete peristaltic pombi zvigadzirwa kana peristaltic pombi yekuzadza masisitimu inogona kuve OEM yakagadzirirwa kupa yakazara mhinduro;iyo peristaltic pombi haidi mavharuvhu uye zvisimbiso kana ichizadza zvinwiwa, uye Hapana kukuvadzwa kwepombi kunokonzerwa nekuoma kumhanya, kushanda kuri nyore, kugadzirisa nyore, uye kuchengetedza mutengo.
Lead Fluid yanga yakatarisana nekugadzira, kusimudzira, kugadzira uye kushambadzira kwepombi dzepombi, uye yakazvipira kupa vashandisi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro peristaltic pombi uye masevhisi akakwana ehunyanzvi.Pamusoro pekuve neakanyanya akazara akateedzana peristaltic pombi chigadzirwa mitsara, Lead Fluid inogona zvakare kupa OEM yakagadzirirwa peristaltic pombi masevhisi zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.Lead Fluid's yakakwana uye yakakura ruzivo yekuvandudza chigadzirwa inogona kukurumidza kukupa iwe nekukurumidza application gwara uye mazano, uye kupa vashandisi mhinduro dzemhando yepamusoro, yepamusoro-chaiyo, uye inodhura-inoshanda peristaltic pombi yekuunza mhinduro.